बिरालोसँग विवाह गर्ने यी महिला एकाएक भाइरल भएपछि…. – Wow Sansar
बिरालोसँग विवाह गर्ने यी महिला एकाएक भाइरल भएपछि….
आजसम्म हामीले मानिसबीच विवाह भएको सुनिएको र देखिएको छ । तर, आज हामी एक महिलाले बिरालोसँग दुईपटक विवाह गरेको बारेमा जानकारी दिनेछौ । स्पेनमा बस्ने ४८ वर्षकी बारबेरेला बुचनरले आफ्नो विवाहको १० औं वर्षगाँठ मनाएकी छन् । उनले यो वर्षगांँठ मानिससँग नभएर दुई बिरालोसँग मनाएकी हुन् । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
वास्तवमा ती महिला पछिल्लो १४ वर्षदेखि आफ्ना बिरालाहरु स्पाइडर र लुगोसीसँग वैवाहिक सम्बन्धमा छिन् । २००४ मा बारबेरेलाले दूई बिरालोसँग विवाह गरेकी थिइन् । त्यो समयदेखि आजसम्म आनन्दले जीवन बिताएकी छिन् । बिरालालाई नै आफ्ना पति स्वीकार गरेर बसेकी छिन् ।
उनले जिन्दगीको लामो समय मानिसमा माया खोज्नमा बिताएकी थिइन् । पछि मानिससँग माया खोज्नु र गर्नु बेकार सम्झेर बिरालोसँग विवाह गरेको बताउँछिन् । उनको अनुसार बिरालोलाई जति माया गर्दा खुशी अरुबाट पाइदैन । उनले बिरालोहरुलाई एक पत्नीले गरेको जस्तै स्याहार गछिन । बिरालोसँग विवाह गर्दा नै उनले कुनै पुरुषसँग विवाह नगर्ने घोषणा गरेकी थिइन्
Prevपारसको जन्मदिनमा हिमानी र छोरीले टिकटकमा नाचेको यो भिडियो फेरी भाइरल (भिडियो हेर्नुहोस्)
Nextहेरिहाल्नुस्, नयाँ वर्षकै दिन नेपालीलाई खुशीको खबर, सकियो चिन्ता, कोरोना खोप हेर्नुहोस् भिडियोमा
थुतुनो’ धेरै चलाउँदा फसिन् रामकुमारी झाँक्री! जेल हाल्ने ओलीको तयारी
अबदेखि महिलाहरु अनुमतिबिना विदेश जान नपाउने